केशव भट्टराइकोको कडा कदम पछि चलचित्र क्षेत्रमा हंगामा::News from Nepal
केशव भट्टराइकोको कडा कदम पछि चलचित्र क्षेत्रमा हंगामा
नियम विपरित नेपाली चलचित्रलाई पेलेर भारतिय चलचित्र कलंक प्रदशन गर्न खोज्ने विरुद्ध चलचित्र विकास वोर्डले एक्सन लिएको छ । नियमानुसार हरेक शुक्रबार नयाँ चलिचित्र लगाउन पाइए पनि २वटा नेपली चलचित्र चलिरहेको अवस्थामा भारतीय चलचित्र लगाउँन खोज्ने हरुलाई बोर्डले रोका लगाएको छ । चलचित्र विकास वोर्डमा केशव भट्टराइ अध्यक्ष भएपछि गरिएको यो निर्णयलाई चलिचित्र जगतले अर्थपुर्ण रुपमा हेरेको छ ।
चलचित्र निर्माता संघले शुक्रबार बाहेक अरु दिनमा विदेशी चलचित्र रिलिज हुँदा नेपाली चलचित्र मर्कामा परेको भन्दै चलचित्र विकास बोर्डलाई पत्र लेखेको थियो । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराइले निर्मातासंघको पत्रमा टेकेर यो निर्णय गरेका छन् । यसैकारण, आज बुधबारदेखि भारत लगायत विश्वभर ‘कलंक’ रिलिज हुँदा नेपालमा भने रिलिज रोकियो ।
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराइको यो बोल्ड निर्णयको चलचित्रकर्मीले स्वागत गरेका छन् । केही हल व्यवसायी र वितरकका लागि यो निर्णय तितो मात्र होइन पदको दुरुपयोग लागेतापनि यो सिंगो चलचित्र क्षेत्रका लागि सुखद पक्ष हो ।
चलचित्र विकास बोर्ड नेपाली चलचित्रको हक हितका लागि खोलिएको अभिभावक संस्था हो । नेपाली चलचित्रमाथिको थिचोमिचोलाई बोर्डले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । अध्यक्ष भट्टराइले लिएको बोल्ड निर्णयले नेपाली चलचित्रकर्मीको उनीप्रतिको आशा बढेर गएको छ ।
ओलीले मोदीलाई फोन गरे के भयो कुराकानी ?
पत्याउँनु भयो? मोदी त चम्चामा पानी तताएर टुँडिखेलमा मर्ने अरे !
अझै पनि कुलमानलाई बदनाम बनाउँने षड्यन्त्रमा मोदी